उपत्यकाका अस्पतालहरूमा नक्कली पीसीआर रिपोर्ट बनाउने धन्दा, कर्मचारी र दलाल पक्राउ — Imandarmedia.com
उपत्यकाका अस्पतालहरूमा नक्कली पीसीआर रिपोर्ट बनाउने धन्दा, कर्मचारी र दलाल पक्राउ
काठमाडौं। कोरोना संक्रमण बढेको बेला नक्कली पीसीआर रिपोर्ट बनाउने दुई अस्पतालका कर्मचारी तथा बिचौलियालाई स्ट्रिङ अपरेशन मार्फत प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका अनुसार नक्कली पीसीआर रिपार्ट तयार गर्ने अस्पतालका ल्याबका सञ्चालक भने फरार छन्। महाशाखाका प्रवक्ता कृष्ण कोइरालाका अनुसार,
भक्तपुरको मध्यपुर ठिमीमा रहेको नागरिक कम्युनिटी टिचिङ हस्पिटल लिमिटेड र काठमाडौं तीनकुनेस्थित कान्तिपुर अस्पताल प्रालिका कर्मचारी र बिचौलिया पक्राउ परेका हुन्।
महाशाखाका अनुसार उनीहरुले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरुका लागि आवश्यक पर्ने पीसीआर रिपोर्ट सरकारले तोकेको भन्दा अत्यधिक बढी रकम लिई स्वाबको नमुना समेत नलिई बनाउँदै आएको सूचनाको आधारमा प्रहरीले स्ट्रिङ अपरेशन चलाएको थियो।
पक्राउ पर्नेमा नागरिक कम्युनिटीका कर्मचारी रोशनकुमार छिट्टान, ल्याब म्यानेजर प्रसन्न कुमार झा रहेका छन्। यस्तै, कान्तिपुर अस्पतालका कर्मचारी नागेन्द्रकुमार यादव, अस्पतालको ल्याबका कर्मचारी माधव मैनाली पक्राउ परेका छन्।
छिट्टानको साथबाट ८ थान र यादवको साथबाट १७ थान नक्कली पिसीआर रिपोर्ट फेला परेको महाशाखाका प्रवक्ता एसपी कोइरालाले जानकारी दिए। प्रहरी टोलीले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुका प्रतिनिधिहरु समेतको रोहबारमा,
दुवै अस्पतालका ल्याबबाट पीसीआर रिपोर्ट उत्पादन गर्न प्रयोग भएका कम्प्यूटर लगायतका उपकरण र दर्ता रजिष्टरहरु समेत नियन्त्रणमा लिएको छ। यस्तै, दुवै ल्याबका सञ्चालक भावेश मिश्र र निर्मल गिरी तथा पिसिआर रिपोर्टमा दस्तखत गर्ने,
ल्याब चिकित्सकहरुको खोजी गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ। दुवै अस्पतालका पीसीआर ल्याबहरु सिल गरी पीसीआर सम्बन्धी सबै सेवा हाललाई बन्द गरिएको र अन्य थप अनुसन्धान कार्य भइरहेको महाशाखाले जनाएको छ।
तेस्तै, सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका विषयमा बिभिन्न राजनीतिक दलका नेता, विशेषज्ञ, कानुनविद लगायतसँग छलफल गरिरहेका छन्।
भेटमा एमसीसी, संसदमा विचाराधीन विधेयक, जारी संसदको अवरोध खुलाउने विषय र संसदसँग जोडिएका विषयमा छलफल हुने गरेको छ। सरकारले एमसीसीलाई अघि बढाउन पहल थालेपछि सभामुख सापकोटा दबावमा छन्।
तर, सभामुख सापकोटाले एमसीसी बजेट जसरी संसदबाट पास हुँदैन भन्ने गरेका छन्। सभामुखलाई पछिल्लो समय भेटेका एक नेताले उनको भनाइ उद्धृत गर्दै अनलाइनखबरसँग भने,
संविधान र कानुनले मेरो भूमिका तय गरेकै छ।एमसीसीका विषयमा सर्वदलीय सर्वपक्षीय रुपमा सहमत भएर आउनुस् न। दलहरु निर्णायक हुँदा मेरो अरु केही भन्नु छैन।
एमसीसीको विषयमा सर्वपक्षीय सहमति हुनुपर्नेमा सभामुखको जोड रहँदै आएको छ। होहल्लाका बीच एमसीसी पास गर्ने तयारी भए आफ्नो साथ नरहने सभामुखले प्रष्ट भन्ने गरेका छन्। ‘नाराबाजी भइरहने र एमसीसी पास गर्ने भन्ने हुन्न।
संसदमा भ्याकुम भएर बजेट पास गरे जस्तो एमसीसी पास हुन्न,’ सभामुखको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले भने। सभामुख सापकोटाका प्रेस विज्ञ श्रीधर न्यौपानेका अनुसार सभामुख सापकोटाले छलफलहरुमा मुख्य गरी तीनवटा विषय राख्ने गरेका छन्।
पहिलो- एमसीसीमा राष्ट्रिय सहमति, दोस्रो- एमसीसीमा जनस्तरबाट उठेका प्रश्नको निरुपण र तेस्रो– संसदको अवरोध अन्त्य। सत्ताका लागि र निर्वाचनमा जानका लागि दलहरु एकमत भएजस्तै एमसीसीको विषयमा पनि एकमत हुँदा राम्रो हुने सभामुखको धारणा रहेको उनको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संसदबाट एमसीसी पास गराउन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा छन् । तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले लामो समयदेखि संसदमा अवरोध जारी राखेको छ।
त्यसैले पहिले संसद खुलाउनुपर्ने हुन्छ। संसद खुलाउने विषयमा यसअघि प्रधानमन्त्री र सभामुखले छुट्टाछुट्टै छलफल आयोजना गरे पनि एमाले अनुपस्थित हुने गरेकाले सहमति जुटेको छैन।
एमसीसीको विषयमा बाहिर बहस धेरै भए पनि संसदमा प्रवेश गरेको छैन। त्यसैले संसदको अवरोध खुलाउनुपर्नेमा सभामुखको जोड छ ।केही दिन अगाडि सभामुखसँग छलफल गरेका संसदीय कानुनका एकजना जानकारले सापकोटाको भनाइ उद्धृत गर्दै भने।
नेपाली जनताको भाग्य र भविष्यसँग जोडिएको विषयमा प्रश्नहरु उठेका छन् त्यसको जवाफ दिने संसद हुन पर्दैन ? यसमा दलहरु सहमत हुनुपर्दैन ? संसद खोल्नु पर्दैन ? एमसीसीका विषयमा दलहरु तयार भए आफूबाट अवरोध नहुने सभामुखको भनाइ रहेको उनले बताए।